ရင်သားတွေ ဘာကြောင့် ယားရတာလဲ - Hello Sayarwon
ရင်သားတွေ ဘာကြောင့် ယားရတာလဲ
Arkar Hein မှ ရေးသားသည်။ 28/01/2022 တွင် ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။
ရင်သားတွေဟာ အာရုံခံစားနိုင်စွမ်းကောင်းမွန်ပြီး နူးညံတဲ့ အင်္ဂါတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်ရင်သားဟာ ယားယံလွယ်တတ်ပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ရင်သားတွေ အဝတ်နဲ့ ပွတ်တိုက်မိခြင်း၊ နှင်းခူနာ၊ နို့ချိုတိုက်ကျွေးရခြင်း၊ သန္ဓေလွယ်ထားရခြင်း စတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကြောင့် ရင်သားတွေ ယားယံတတ်ကြပါတယ်။ ပြင်းထန်တဲ့ ရောဂါ ဖြစ်နေလို့ ရင်သားယားယံတဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေက တော်တော်ရှားပါတယ်။ ရင်သားယားယံတဲ့အခါ များသောအားဖြင့် ကုတ်လိုက်ရုံနဲ့ သာမန်ပျောက်သွားလေ့ရှိပေမဲ့ တစ်ခါတစ်ရံ ယားနာပျောက်ဆေးလို ဆေးတွေသုံးတာတောင် ယားနေတုန်းဆိုရင်တော့ တစ်ခြား ရောဂါတွေ ဖြစ်နေနိုင်တဲ့အတွက်ဆရာဝန်ထံ သွားရောက်ပြသသင့်ပါပြီ။ ကျွန်တော် ဒီဆောင်းပါးလေးထဲမှာတော့ Hello ဆရာဝန်စာဖတ်ပရိတ်သတ် အမျိုးသမီးတွေ အတွက် ရင်သားယားယံရခြင်း အကြောင်းရင်းတွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။
၁။ ရာသီဥတု ခြောက်သွေ့ခြင်း။
အေးချမ်းပြီး ခြောက်သွေ့တဲ့ ရာသီဥတုတွေက သင့်ရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်တစ်ခုလုံးကို ယားယံစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရင်သားနဲ့ ရင်သားထိပ်ခေါင်းတွေလည်း ရာသီဥတုကြောင့် ရောင်ရမ်းနိုင်ပြီး ရင်သားဟာ အနီရောင်ပေါက်ပြီး ပွန်းပဲ့နာများ ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာဆိုရင် ရေကြက်သီးနွေးလေးနဲ့ ၁၀ မိနစ် ခန့်ချိုးပေးပါ။ ရေပူနဲ့ မချိုးပါနဲ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ရေနွေးတွေဟာ သင့်ရဲ့ ခန္ဓါကိုယ်ပေါ်မှ အရေးပါတဲ့ အဆီတွေကို ပါသွားစေနိုင်ပြီး အရေပြားကို ပိုပြီးတော့တောင် ခြောက်သွေ့စေနိုင်တာကြောင့်မို့ပါ။ ပြီးရင် သဘတ်ဖြင့် ရေသုတ်ပြီး ခရမ်ဖြစ်ဖြစ်၊ လိမ်းဆေးဆီဖြစ်ဖြစ် ရင်သားများကို လိမ်းကျံပေးခြင်းဖြင့် ခြောက်သွေ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တဲ့ ယားယံခြင်းကို ပျောက်ကင်းစေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
နှင်းခူနာ ဖြစ်မယ်ဆိုရင် ရင်သားထိပ်ခေါင်းမှာ ကြွပ်ဆတ်တဲ့ အရေခွံတွေကိုတွေ့လာရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှင်းခူနာ ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ceramides လို့ခေါ်တဲ့ အဆီမော်လီကျူးတွေပါဝင်တဲ့ လိမ်းဆေးတွေ၊ အရေပြားကို သက်သာစေမယ့် အဆီကဲ့သို့သော ပါဝင်ပစ္စည်းတွေပါဝင်တဲ့ လိမ်းဆေးတွေကို လိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ခန္ဓါကိုယ်မှ သဘာအတိုင်း ထုတ်လုပ်တဲ့ Cortisol ဟော်မုန်း ဆေးခရမ်ဖြစ်တဲ့ hydrocortisone ဟာ ရင်သားရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ ယားယံခြင်း တို့ကိုပျောက်ကင်းစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဆရာဝန်ထံပြသမယ်ဆိုရင် နှင်းခူနာအတွက် ဆီပါတဲ့ လိမ်းဆေးမျိုးကို လိမ်းဖို့ ညွှန်ကြားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှင်းခူနာ ဖြစ်နေတဲ့အချိန် ရင်သားမှ အရည်တွေ စိမ့်ထွက်လာမယ်၊ နာကျင်လာမယ်ဆိုရင် ကူးစက်ရောဂါ ကူးစက်ခံရခြင်းရဲ့ လက္ခဏာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အတွက် ဆရာဝန်ထံ သွားရောက်ပြသသင့်ပါတယ်။
ရင်သားတွေ ယားယံခြင်းရဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းအရာက သင်သုံးနေတဲ့ ဆပ်ပြာ အမှတ်တံဆိပ်အသစ်တွေ၊ Lotion တွေနဲ့ အဝတ်လျှော် ဆပ်ပြာတွေ ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သန့်စင်ရေး ထုတ်ကုန်တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ ဓါတုပစ္စည်းတွေဟာ dermatitis လို့ခေါ်တဲ့ အရေပြားနီပြီး ရောင်အန်းနာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီ အရေပြားတွေကို နီရဲစေတဲ့ အနာတွေဟာ ခန္ဓါကိုယ်ကို ယားယံစေနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ဆပ်ပြာသစ် ပြောင်းသုံးလို့ ရင်သားတွေ ယားယံလာရင် allergic မဖြစ်စေဖို့ အတွက် ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ဆပ်ပြာတွေ၊ အနံ့မပါတဲ့ ဆပ်ပြာတွေနဲ့ အရောင်မပါတဲ့ ဆပ်ပြာတွေကို ပြောင်းလဲသုံးကြည့်ပါ။
၄။ အတွင်းခံ အဝတ်အစားများ။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ သင့်ရဲ့ ဘရာစီယာနဲ့ အမျိုးသမီး ဝတ်အတွင်းခံတွေမှာပါဝင်တဲ့ ချည်သားတွေနဲ့ ဆိုးဆေးတွေကို ဓါတ်တုံ့ပြန်တဲ့အနေနဲ့ ရင်သားတွေ၊ ရင်သားထိပ်ခေါင်းတွေ ယားယံတတ်ပါတယ်။ ဒီလို ဓါတ်မတည့်တဲ့အခါ ဒီအထည်တွေနဲ့ ထိလိုက်တာနဲ့ dermatitis လို့ခေါ်တဲ့ အရေပြားနီပြီး ရောင်အန်းနာတွေကို ဖြစ်စေပါတယ်။ အကယ်၍ ဒီလို အောက်ခံအဝတ်အစားတွေ ဝတ်အပြီးမှ dermatitis ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင် dermatitis တွေ ပြန်လည်ပျောက်ကင်းသွားအောင် ကိုယ်အရင်က ဝတ်နေကျ အောက်ခံအဝတ်အစားတွေကို ခဏမျှ ပြန်လည်ပြောင်းဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။
လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တဲ့အခါ သင်ရဲ့ ဘရာစီယာက အရမ်းကျပ်နေမယ်ဆိုရင် ရင်သားထိပ်ခေါင်းတွေကအဝတ်စနဲ့ သွားတိုက်မိနိုင်ပြီး ပွန်းရှနာတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒီဒဏ်ရာတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုရင် ယားယံမှုနဲ့ နာကျင်မှုကို ပိုခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့ Vaseline လို့ခေါ်တဲ့ ဂျယ်တွေကို လေ့ကျင့်ခန်း မလုပ်ခင် ထို ဧရိယာတစ်ဝိုက်မှာ လိမ်းထားသင့်ပြီး ဘရာစီယာကလည်း အရမ်းမကျပ်ဘဲ အတင့်အသင့် ဖြစ်နေဖို့ လိုပါတယ်။
ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားရချိန်ဆိုရင် ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာခြင်း၊ မနက်ပိုင်း ပျို့ချင်အန်ချင်စိတ်ဖြစ်ခြင်း၊ ဟော်မုန်း အတက်အကျဖြစ်ခြင်းနဲ့အတူ ရင်သားယားယံခြင်းကိုပါ ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ရခြင်းရဲ့ လက္ခဏာတွေ ဖြစ်ပြီး ဟော်မုန်းပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ အတူ ရင်သားတွေက ကလေးငယ်ကို နို့ချိုတိုက်ကျွေးဖို့ ပြင်ဆင်တဲ့ အနေနဲ့ ပြည့်တင်းလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာ ကိုးကိုမှုန့် ရတဲ့အဆီများ၊ သိုးမွှေးများရတဲ့အဆီများကို သုံးခြင်းက ရင်သားယားယံခြင်းကို လျှော့ကျစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နို့ရည် အကြွင်းအကျန်တွေ၊ နို့ရည်သယ်ပြွန်တွေ ပိတ်ဆို့ခြင်းနဲ့ နို့ချိုတိုက်ကျွေးတဲ့ အခါ အနေအထားမမှန်တဲ့အခါမှာ ရင်သားထိပ်ခေါင်းတွေ နာကျင်ပြီး ယားယံလာနိုင်ပါတယ်။ နို့ချို့တိုက်ကျွေးတဲ့အခါ ရင်သားထိပ်ခေါင်းတွေကို သန့်ရှင်းအောင်လည်း ထားသင့်ပြီး ရင်သားနာကျင်ယားယံနေမယ်ဆိုရင်တော့ သိုမွှေးမှရတဲ့ လိမ်းဆေးဆီ (Lanolin ointment)တွေ လိမ်းပေးခြင်းက ရင်သားယားယံခြင်းကို သက်သာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နို့ချိုတိုက်ကျွေးနေတဲ့အချိန် ရင်သားထိပ်ခေါင်းနားတစ်ဝိုက်မှာ ယားယံရုံသာကဘဲအရေပြား အလွှာချပ်တွေကိုပါ တွေ့နေရမယ်ဆိုရင်တော့ Candida albicans လို့ခေါ်တဲ့ မှိုတစ်မျိုး ပေါက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရတဲ့ မှက္ခရု ဝေဒနာကို ခံစားနေရတဲ့ လက္ခဏာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါဆိုရင် မှိုတွေကို တိုက်ဖျက်နိုင်တဲ့ လိမ်းဆေးတွေကိုရင်သားနဲ့ ရင်သားထိပ်ခေါင်းနား တစ်ဝိုက် လိမ်းပေးနိုင်ပြီး မပြင်းတဲ့ မှိုတိုက်ဖျက်ဆေးတွေလည်း သောက်သုံးပြီး ကုသနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ဘဝဖြစ်စဉ်ထဲမှာ မဖြစ်မနေဖြတ်သန်းရမယ့် သွေးဆုံးချိန်ရောက်လာချိန်မှာတော့ အရေပြားတွေ ပါးလာခြင်း၊ ခြောက်သွေ့လာခြင်းနဲ့ ပိုယားယံလာခြင်းတို့ကို ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို အရာတွေဟာ ဟော်မုန်း ပမာဏ အတက်အကျ မြန်လာခြင်းနဲ့ အီစထရိုဂျင် ဟော်မုန် နည်းလာခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ရတာ ဖြစ်ပြီး ခန္ဓါကိုယ်ကလည်း အဆီတွေ မထုတ်လုပ်နိုင်တော့တဲ့ အတွက် အရေပြားပိုမို ခြောက်သွေ့လာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် အမျိုးသမီး မွေးလမ်းကြောင်းနဲ့ ရင်သားထိပ်ခေါင်းတွေမှာ ယားယံမှုတွေကို ခံစားလာရမှာပါ။ ဒါကို ကုသဖို့ အတွက်ဆိုရင်တော့ အရမ်းမပြင်းတဲ့ ဆပ်ပြာနဲ့ ရေချိုးခြင်း၊ Lotion များလိမ်းပေးနိုင်ပြီး ရေပူနဲ့ ရေချိုးခြင်းတို့ကို သတိထားရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
၁၀။ ရေဒီယို ဓါတ်ရောင်ခြည် ဖြင့် ကုသခြင်း။
ရင်သားကင်ဆာ ဖြစ်ရင် ကုသရတဲ့ နည်းလမ်းတွေက ကုသမှု ဖြစ်စဉ်ပြီးသွားရင်တောင် ရင်သားနဲ့ ရင်သားထိပ်ခေါင်းတွေကို ပြင်းထန်စွာ ယားယံစေနိုင်ပါတယ်။ ရေဒီယိုဓါတ်ရောင်ခြည်ဟာ အရေပြားဆဲလ်တွေကို သတ်ပစ်ပြီး အရေပြားကို ခြောက်သွေ့စေခြင်း၊ ပူစပ်စေခြင်းနဲ့ အရေခွံတွေ လန်တာနဲ့အမျှ ယားယံခြင်းတို့ကို ဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို ယားယံမှုကို ခံစားနေရမယ်ဆိုရင် ထိုဧရိယာ တစ်ဝိုက်ကို ရေခဲတုံးများနဲ့ ပွတ်တိုက်ပေးခြင်း၊ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး ချည်ထည် အဝတ်အစားများကို ဝတ်ဆင်ခြင်းနဲ့ အရည်ဓါတ်များများ သောက်သုံးပေးခြင်းဖြင့်ယားယံမှုကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဟစ်စ္စတာမင်းလို့ခေါ်တဲ့ မတည့်တဲ့အရာနဲ့ ထိတဲ့အခါယားယံစေတဲ့ဒြပ်ပေါင်းကို တိုက်ဖျက်ပေးတဲ့ antihistamines ဆေးတွေနဲ့ corticosteroid ဟော်မုန်းသောက်ဆေးတွေ သောက်ခြင်းဖြင့်လည်း ယားယံမှုကို လျှော့ချနိုင်ပါတယ်။
၁၁။ ရင်သားထိပ်ခေါင်းဆိုင်ရာ ပဲဂျက်စ် ရောဂါ (Paget’s Disease of the Nipple)
၁၉ ရာစုခန့်က ဗြိတိန် ဆရာဝန်တစ်ဦး ဖြစ်တဲ့ Sir James Paget ရဲ့ နာမည်ကို ဂုဏ်ပြုပြီး ခေါ်ဝေါ်ထားတဲ့ ရင်သားထိပ်ခေါင်းဆိုင်ရာ ပဲဂျက်စ် ရောဂါဟာ ရှားပါးတဲ့ ရင်သားကင်ဆာ ပုံစံတစ်မျိုး ဖြစ်ပြီး ကင်ဆာဆဲလ်တွေက ရင်သားထိပ်ခေါင်းတစ်ဝိုက်မှာ ဖြစ်ပေါ်တတ်ပါတယ်။ ဒီကင်ဆာဟာ ပထမဆုံး ရင်သားထိပ်ခေါင်း နို့သယ်ပြွန်တွေမှာ စဖြစ်ပြီး နောက်မှာရင်သားထိပ်ခေါင်း မျက်နှာပြင်နဲ့ areola လို့ခေါ်တဲ့ ရင်သားထိပ်ခေါင်း တစ်ဝိုက်က အနက်ရောင် အရေပြားတွေထဲကို ပျံ့နှံသွားတတ်ပါတယ်။
ဒီကင်ဆာ ဖြစ်နေမယ်မယ်ဆိုရင်လည်း ရင်သားထိပ်ခေါင်းတွေနဲ့ ရင်သားထိပ်ခေါင်းတစ်ဝိုက်က အနက်ရောင် အရေပြားဟာ အရေခွံဖတ်တွေ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး နီရဲယားယံလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ National Cancer Institute ရဲ့ လေ့လာချက်အရတော့ ရင်သားထိပ်ခေါင်းဆိုင်ရာ ပဲဂျက်စ် ရောဂါဟာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ရင်သားကင်ဆာတွေရဲ့ ၅ ရာခိုင်နှုန်း အထိသာ ရှိတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ရင်သား ထိပ်ခေါင်းဆိုင်ရာ ပဲဂျက်စ် ရောဂါဟာ အရေပြားတွေ ကျွတ်ဆပ်ပြီး အရေခွံကွာတတ်တာကြောင့် နှင်းခူနာနဲ့ မှားတတ်ကြပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ နှင်းခူနာနဲ့ ကွဲတဲ့အချက်က ဒီပဲဂျက်စ်ရောဂါဟာ ရင်သားထိပ်ခေါင်းတစ်ဖက်တည်းမှာပဲ ဖြစ်တတ်ပြီး အဝါရောင် နဲ့ သွေးရောင် အရည်တွေ ထွက်တာကိုတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ နှင်းခူနာ ပျောက်ဆေးတွေနဲ့ကုသတာတောင်မပျောက်ဘူးဆိုရင် ခန္ဓါကိုယ် အသားမျှင်ကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးဖို့လိုပါတယ်။ ပဲဂျက်စ်ရောဂါကို များသောအားဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသလေ့ ရှိပြီး ပြီးမှာ ရေဒီယို ဓါတ်ရောင်ခြည်နဲ့ ကုသလေ့ ရှိပါတယ်။
၁၂။ အန္တရာယ် မရှိတဲ့ အကျိတ်များ။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ ရင်သားပြွန်တွေ အထဲမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ ကင်ဆာကျိတ်မဟုတ်တဲ့ သာမန်အကျိတ်တွေကလည်း ရင်သားထိပ်ခေါင်း အရေခွံတွေကို မာကြောယားယံစေနိုင်ပါတယ်။ အကျိတ်အတွက် ရောဂါ စစ်ဆေးမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်တွေက ရင်သားပြွန်တွေကိုဓါတ်မှန် ရိုက်ခြင်း၊ နှုန်းလွန်အသံလှိုင်း (ultrasound) ရိုက်ခြင်း၊ Mammography လို့ခေါ်တဲ့ X-Ray ဖြင့် ရင်သားပုံရိပ်ဖော် နည်းစနစ်များနဲ့ စစ်ဆေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အများဆုံး ဒီအကျိတ်တွေကို ခွဲစိတ်ပြီး ကုသလေ့ရှိကြပါတယ်။
Accessed (18. June. 2018)
ကျန်းမာတဲ့ ရင်သား တွေကို ပိုင်ဆိုင် ရရှိစေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ
ရင်သားထိပ်ခေါင်းတွေ ဘာကြောင့် မည်းရတာလဲ